Ciyaaryahanka Ugu Qaalisan Ciyaartoyda Kubada Cagta Oo Gaadhay Magaalada Barakaysan Ee Maka Si Uu Cimraysto | Berberatoday.com
Ciyaaryahanka Ugu Qaalisan Ciyaartoyda Kubada Cagta Oo Gaadhay Magaalada Barakaysan Ee Maka Si Uu Cimraysto
Makkah(Berberatoday.com)-Ciyaariyahanka ugu qaalisan dunida kubadda cagta Paul Pogba ayaa u duulay dalka Saudi Arabi si uu bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan ugu soo cumreysto magaalada Mecca maalmo qudha kadib markii uu Man United ka caawiyay iney ku guuleysto markii ugu horeysay koobka UEFA Europa League.
Paul isbadal ayuu ku sameeyay qaabka timahiisa isagoo doonaya inuu bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan ku qaato Xajka waana mid ka mid ah xidigaha Muslim-ka ah ee inta badan booqda dhulka barakeysan.
24-jirkaan heerka caalami waa mid jecel inuu mar walba guto waajibaadkiisa diiniga ah, balse lama oga inuu si wadi soomidda bishaan madam alagu daray liiska ciyaartoyda qaranka France ee bisha June la ciyaaraya Paraguay, Sweden & England.
Pogba wuxuu ugu duulay Mecca inuu soo cumareysto, wuxuuna taageerayaashiisa la wadaagay muuqaal yar oo uu kaga mahad celinayo iney taageero u ahaayeen xili ciyaareedka dhan isagoo ku wargaliyay inuu aadayo Saudi Arabia si uu waqti qurux badan usoo qaato.
Ugu dambeyntii Paul Pogba waxaa laga doonayaa inuu dib ugu soo laabto Old Trafford horaanta July markaas oo shaqada kooxda ay dib u bilaabaneyso.